Zika virus ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်
တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့ ကရစ်ဘီယန်ဒေသမှာ ကူးစက်နေတဲ့ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို ကူးစက်ခံရရင် Microcephaly ဦးနှောက်သေးတဲ့ကလေးမျိုးမွေးလာစေနိုင်တယ်။ ကလေးကခေါင်းသေးနေမယ်။ အသက်တိုမယ် ရှင်နေသလောက်လည်း အဆင့်မမီပါ။
ကူးစက်ခံရရင် ကိုယ်ပူမယ်။ မျက်စိနာမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ အဆစ်တွေနာမယ်။ အရေပြားမှာ အနီပြင်ထွက်မယ်။ ရှားတဲ့ Guillain-Barre ဆင်ဒရုမ်းဖြစ်ရင် ယာယီလေဖြတ်သလိုနေမယ်။ ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေး။ ပျောက်အောင် ကုသပေးနိုင်တဲ့ဆေး မပေါ်သေးပါ။ နားနေခိုင်းပြီး အရည်များများသောက်ဘို့သာတတ်နိုင်သေးတယ်။
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကို ၁၉၄၇ တကည်းက အာဖရိကတိုက်၊ ယူဂန်ဒါမှာ စတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၂ ယောက်သာတွေ့ခဲ့တယ်။ နိုက်ဂျီးရီးယားမှာ ၁၉၅၄ မှာတွေ့လာတယ်။ ဒိနောက် အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ကျွန်းတွေဆီအထိရောက်လာခြံပြီး အခုမှသာ လက်တင်အမေရိကကိုရောက်လာတယ်။
ကူးစက်မှုကို Aedes aegypti ခြင်ကနေတဆင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီခြင်က ရေသန့်-ရေသေမှာနေတယ်။ အဝါရောင်အဖျားရောဂါနဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကိုလည်း ကူးစက်စေတယ်။
အဲလို ဦးနှောက်သေးတဲ့ကလေးမျိုးမွေးတာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်စပ်မှုကိုတော့ တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်လို့တော့သိတယ်။ ဘရာဇီးလ်မှာ ၂ဝဝ၄ တုံးက ကူးစက်ခံထားရသူ ၁၅ဝ သာရှိခဲ့ရာကနေ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ၃၅ဝဝ ရှိလာတယ်။ အဲဒီဒေသတခုလုံးမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ ၁၉၇၇-၇၈ တုံးက ပါကစ္စတန်၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခုထိကူးစက်လာမှုမရှိသေးပါ။ ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဆီ မသွားရ။ ခြင်ကိုက်မခံရ။ ခြင်နှိမ်နင်းပါ။
၁။ အသက် ၂၁၊ မ။ ခံတွင်းအနံ့မကောင်းခြင်း ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်မသောက်ပါ။ ရေသောက်နည်းသည်။ သွားမှန်မှန်တိုက်သည်။ စကားမပြောချိန်ကြာလျှင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းပိုဆိုးရွားကြောင်း သတိထားမိပါသည်။ ဖြစ်ချိန် သုံးလ။ ဘာကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရပါသလဲနှင့် အနံ့ဆိုးပျောက်စေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုပါသည်။ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်ရှင့်။ ၂။ ဆရာရှင့် ကျမအမရဲ့ အမျိုးသားက အသက် ၄၀ ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ သူက တခါတရံ စကားပြောတဲ့အခါ သူ့ခံတွင်းက ပုပ်ပုပ်အက်အက်အနံ့ ထွက်ပါတယ်တဲ့ရှင့်။ ကျမ အမကလဲ အမြဲလိုလိုပြောတတ်ပါတယ်။ ကန်တော့ပါ။ ဆေးစစ်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်ပါတယ်တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်က အနံ့မရကြောင်း ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့မိသားစုကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေလိုပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုဆေးမျိူး သုံးစွဲသင့်ပါသလဲရှင့်။ ကျမလဲ အဲ့လိုပုံစံမျိုး ဘယ်တဦးတယောက်ထံမှ မကြားဖူး မသိဖူးပါရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားစေလိုပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်။ ၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်၏သား ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့မှာ အသက်ရူထုတ်လိုက်သည့်အခါ ထွက်လာသည့် လေတွင် ဆိုးဝါးသည့်အနံတစ်ခု ထွက်ထွက်လာပါသည်။ ငယ်ရွယ်သည့်အရွယ်က အနည်းငယ်သာ ထွက်ပါသ
၁။ အသက် ၅၅ နှစ် အမျိုးသမီးပါဆရာ။ ညဘက်ကို နှစ်နာရီ နောက်ပိုင်းလောက်မှ စအိပ်ဖြစ်တာ ခုဆို ဆယ်နှစ် ကျော်ပါပြီဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပါတ်လောက်က နေ့ခင်းဘက် မူးလဲလို့ပါဆရာ။ အဲလို ညဘက်နောက်ကျမှ အိပ်တာ အလေ့အကျင့်လား ရောဂါတခုလားဆရာ။ စောအိပ်ဖို့ပြောတာလဲမရလို့ ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးလို့ ရနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ၂။ ဆရာခင်ဗျား ဆရာ့ရဲ့ဆေးပညာဆောင်းပါးများကို ကျွန်တော် အစဉ်တစိုက်ဖတ်ရှုခဲ့သလို အရမ်းလည်း နှစ်သက် လေးစားမိပါတယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်အပါအ၀င် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေခံစားနေရတဲ့ အအိပ်ပျက်ရောဂါ insomania အကြောင်းလေး ရေးပေးပါခင်ဗျား။ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါဆိုတာ ကျန်းမာရေးကြောင့်နဲ့ စိတ်ပိုင်းကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အိပ်တဲ့စနစ်လိုတာလည်းရှိတယ်။ ဆေးသုတေသနဆရာဝန်တွေက ဦးနှောက်ကိုပါလေ့လာကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိပ်ချိန်နဲ့ နိုးနေချိန် အလှည့်ကျရှိတယ်။ တခုဖြစ်နေစဉ် ကျန်တခုက မဖြစ်ပါ။ တမျိုးမျိုးမှာ လွန်ကဲနေခြင်းကနေ ကျန်တခုကိုပါသက်ရောက်စေတယ်။ Medical Causes of Insomnia ကျန်းမာရေးအကြောင်းခံ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သာမန်လောက်ကနေ ဆိုးတာအထိရှိတယ်။ တချို့ကျန်းမာရေးအကြောင်းခံတွေ သူ့ကိုယ်၌ကနေ အိပ်မရတာဖြစ်စေပြီး၊ တချို့တော့ ကျန်မာရေးကြောင့်
မှ နဲ့ က ဘယ်ဟာအမှန်လဲလို့ မေးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ကြိုဆိုပါ၏ကသာ မှန်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှ နေပြည်တော်သို့၊ ရန်ကုန်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ မှန်တယ်။ နာမ်ဝိဘတ် ၁၆ မျိုးရှိတယ်။ 1. သည်၊ က၊ မှာ = ကတ္တားဝိဘတ် 2. ကို = ကံဝိဘတ် 3. မှ၊ က = ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ် 4. သို့ = ရှေ့ရှုရာပြဝိဘတ် 5. သို့၊ ထိ၊ အထိ၊ ထိအောင်၊ တိုင်အောင် = ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် 6. ဖြင့်၊ နှင့် = အသုံးခံပြဝိဘတ် 7. ကြောင့်၊ ဖြင့် = အကြောင်းပြဝိဘတ် 8. အား = လက်ခံပြဝိဘတ် 9. ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က = အချိန်ပြဝိဘတ် + နေရာပြဝိဘတ် 10. ၏ = ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ် 11. အလိုက်၊ အရ၊ အတိုင်း၊ အလျောက်၊ အားလျော်စွာ၊ နှင့်အညီ၊ နှင့်အမျှ = လိုက်လျောပြဝိဘတ် 12. နှင့်၊ နှင့်တကွ၊ နှင့်အတူ = ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ် 13. တွင်၊ အနက်၊ အထဲမှ၊ အထဲမှာ = ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ် 14. ငှာ၊ အလို့ငှာ၊ ဖို့၊ အဖို့၊ အတွက် = ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ် 15. တိုင်တိုင်၊ တိုင်အောင် = နေရာဆက်ပြဝိဘတ် 16. တိုင်တိုင်၊ တိုင်အောင်၊ ပတ်လုံး၊ လုံးလုံး = အချိန်ဆက်ပြဝိဘတ် က = ကတ္တားဝိဘတ် + ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ် + အချိန်ပြဝိဘတ် + နေရာပြဝိဘတ် မှ = ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ် သပြေကုန်းရွာက ကြိုဆိုပါ၏ကသာ သဒ္ဒါအရ
A Clarification ရှင်းလင်းချက်
Dr. Tin Mar Aung ဒေါက်တာတင်မာအောင်
Gold plate sets မျက်နှသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်တက်
Laser Eye Operation လေဆာနဲ့ မျက်မှန်မလိုအောင်လုပ်ြ...
Old Black and White
1947 and 2008
Stay away အမြဲခွါရှင်း ဖဲကြဉ်မင်း
Amazing beauty benefits of Neem တမာရဲ့ဆေးစွမ်း
U Labang Grong သမိုင်းကောင်းကြပါစေ
Proton beam cancer therapy ကင်ဆာကို ပရိုတွန်ရောင်ြ...
HIV becoming resistant to Tenofovir ဆေးယဉ်ပါးလာတဲ့...
Victoria University Collage ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကဆေးတက္ကသ...
HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး
VOA interview on U Shwe Mann
An injectable HIV treatment could be ready by 2017
Union spirit of Bogyoke Aung San ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန...
Handicapped အင်္ဂါမစုံတာ ဒုက္ခိတ
Richard Nixon's signature လက်မှတ်ကပြောတဲ့ သူ့သမိုင်း
Mosquitoes ခြင်မတွေ သတိထား
Northeast Militants Carrying out Opium Cultivation...
Self-discipline စည်းကမ်းရှိရင် အမောသက်သာတယ်
Chikungunya ဆင်ဖြူတော် တုပ်ကွေး
Zika virus ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် သတိထားသင့်လာပြီ
Fun for food ရီစရာကို အရင်စားရခြင်း
Ecstasy Drug Tests စိတ်ကြွဆေး ဆေးစစ်ခြင်း
Returning from school လူမျိုးစုံနေတဲ့ကျောင်း
High platelets သွေးမှုံများနေခြင်း
The Flower ဘုရားပန်း
Flowering Plants ပွင့်သောပန်းများ လန်းပါစေ
Mother's Day အမေနေ့
Milk and Diabetes ဆီးချိုနဲ့ နို့
Elected due date for LSCS ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ဘယ်နှစ်လမ...
Cervicitis သားအိမ်ဝ ရောင်ခြင်း
The right side စာပေပညာရှင်များ
Quality Education မဟောသဓလို ပညာတွေတတ်မြောက်ကြပါစေ
Monywa jail မုံရွာထောင်
The students of Institute of Medicine, Mandalay
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၃)
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၂)
Natural disasters everywhere သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (၁)
Just the perfect name နာမည်ကောင်းပေးထားရင် သတိထား
1973-74 Phaung Gyi Training
Intestine အူဘယ်နှစ်ခွေ မောင့်ဝမ်းထဲမှာရှိပါသလည်း
Indiana Colleges and Universities အင်ဒီယာနာပြည်နယ်...
School in winter season ဆောင်းနဲ့ ကျောင်း
Alkaline water အယ်လ်ကာလိုင်းရေ
Commode toilet အိမ်သာတော်လှန်ရေး
Blanket criticism ဝါးလုံးသိမ်းပြစ်တင်ခြင်း
Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း
I’mabit tired
Tea shop culture ချိုပေါ့ကျ နောက်တခွက်
Ancient Burma ရှေးမြန်မာတွေ
Misuse and Abuse of Prescription Drugs တရားဝင်ဆေး ...
Living with one kidney ကျောက်ကပ် တလုံးတည်းသာ
Natural fertilization device for IVF
ECG အီးစီဂျီနဲ့ မြန်မာဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်း
UMEH ဦးပိုင်လီမိတက် အပိုင်း (၂)
Acne during pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဝက်ခြံ
Naga friends နာဂမိတ်ဆွေများ
Over 35 and birth control options အသက်မငယ်သူများသံ...
Hepatitis C mother and breastfeeding စီပိုးမိခင်နဲ...
Oh! Whatatreat